Taageero qaxootiga Croatia – Support for refugees
TAAGEERADA EE QAXOOTIGA
Talinta nafsi qaxootiga ee Croatia
Caalamadaha uu leeyahay islahadalka
Ma waxaad dareemaysaa islahadal?
Majoojin ladahay fikirka kusaabsan dhibaa tooyinkaada iyo xaadaha adag ee aad marayso?
Dhib maku qabtaa hurdada?
Maka walwal santahay mustaq balkaada?
Dadka kugu hareereesan dhib maku qabtaa?
May kugu adag tahay laqabsashada xaaladaha cusub?
Waamaxay latalinta maskaxeed?
Latalinta maskaxeed waa lagusiiyo caawinaad ayadoo la isticmaalayo hab wada sheekeesi ah. Muhiimada laga leeyahay waa in laga guulaysto dhibaatooyinka ku haysto, mararka qaar magaran karno xaalada aan kusuganahay xaalada ku xegto waxa aan sameen doono , marka waxaan ubaahan nahay wax noo sharaxo
Hadafka laga leeyahay wada sheekeesiga waa in uu qofka helaa caawinaad , amaan , kalsooni, qoka lataliyaha iyo qofka lalatalinaayo waxa u dhexeeyo labadooda uun bay ku egtahay, qofka lataliyaha waa qof xirfad uleh shaqadiisa wuxuu garanayaa sida loo loodhageesto, sida loofahmo, sida loocaawiyo sida looxaliyo dhibaa tooyinka, intuu kubaaro kuma siinayo daawooyin lakiin kula sheekeesanayaa wuxuu kuu helayaa jawaabaha aad ubaahan tahay iyo xalalka aad ubaahan tahay . halkii kulan oo latalineed waxa uu qaadan karaa 45 daqiiqo ilaa 60 daqiiqo.
Sidee ushaqaysaa latalinta?
Wada sheekeesiga waxa uu naga caawinayaa in aan lamacaamilno waxyaalaha aan dareemayno , kawalwalsanahay kacabsanayno ka argagaxsanahay, I W M. hadalaka waxa uu naga caawiyaa inaan dareemin kalinimo waxa uu nasiiyaa caawinaad waxa aan ubaahanahay. Marka uu qofka kufahmaayo waxaa sahlanaanayo in aan xalino dhibka aan ku jirno hadalka waxa uu nasiinayaa fursad aan ku ogaano fikrado cusub oo aan horay oogu fikirin.
Waxaa lalataliyaa qofka ubaahan caawinaad hadii uu dhib ku haysto iyo hadii aad ubaahan tahay fikrad labadaba, waxaa laga yabaa inay kusoo wajahaan dhibaa too yin xiriir ama inaad qobto walwal ama dareen kaasoo dhib kugu haya maalin kasta , kasoo dhib ugeesanaayo riyooyin kaadii kaasoo cabsi kugu abuurayo , waxaa laga yaabaa inaad dareemayso dhib ka imaanaya xiriirka idin kadhaxeeyo adiga iyo bulashada aad ku dhex nooshahay ama adiga iyo qooskaada .
Qofkasta oo inaga mid ah waxaa soo wajahdo mar uusan karanayn waxa uu sameen doono saas darteed marka aan kafikrno dhibaatoo yinka nahaysto way nagu adkaanaysaa waxaa dareemeenaa, xanaaq, dhibaato, murugo, kalinimo , iyo isfahan la,aan.
Kooxda lataliyaasha maskaxeed ee CENTER MUDUS waxa ay qabaan lataliyayaal iyo turjuwaano , dhamaan lataliyayaasha waxa ay sifiican oogu hadlaan afka ingiriiska, laakiin hadii aad rabto in aad ku hadasho afkaada hooyo ama ay jirto af aad sifiican ufahmayso waxa aan kuu haynaa turjuwaano afafka carabiga, Turkish, faranji, iyo soomaali.
Ururka latalinta maskaxeed waa urur aan faa iido doon ahayno , dowlad hoos tagin, la aasaasay 1993 xaruntiisa ay tahay Zagreb Korayshiya, shaqada oogu waaween oon qabano waa faragalin maskaxeed iyo caawin (latalin maskaxeed, dawayn maskaxeed daawaynta qalalaasaha gudaha ah sida qooska khilaafkiisa dhexdhaxaadin tiisa, dhibaatooyinka maskaxeed faragalin tooda iyo waxba-rashada cilmi nafsiyeed iwm).
Caruurta, kurayda iyo qooyska xarunta modus waxa ay kamid yihiin bulshada latalinta maskaxeed ubaahan waa xarun latalineed oo aad kaheli karto caawin, kaalmo iyo dad xirafad sare uleh latalinta si ay kaaga caawiyaan wax yaalaha aad dareemayso iyo walwalka.
Halkeen kadaganahay zagreb
Hadii aad daneenayso wax qabad kanaga nala soo xariir!
Waxaad balan ku sameesan kartaa si taleefoon ah adigo oo ku hadlaya luqada ingiriiska ama korayshiya hadii aadan garanayn labadaa af waxaa kuu furan jaanis kale oo ah adigoo isticmaaliya iimayl ama maseej afafka carabik Turkish faranj soomaali sitoos ah nagala soo xariir iimalada ama aleefoonada hoos ku qoran:
Child, Adolescent and Family Centre Modus
Kneza Mislava 11¹, Zagreb
Teel: +385 1 4826 111
Moobeel: +385 95 4826 111
Saacadaha shaqada: Isniinta – Jimce ka 9 in 20
This website was created thanks to the financial support of the Ministry of Social Policy and Youth
© 2017 Society for Psychological Assistance (SPA)